Andriantomponimerina - Wikipedia
Andriantomponimerina dia zanak' Andriamasinavalona tamin-dRamananandrianjaka, izay notendren' ity mpanjaka ity hifehy ny ampahany amin' Imerina, tao Ambohidratrimo. Naditra Andriantomponimerina ka nisy fotoana nitanany ho babo an-drainy hanereny azy mba hanome ny fanjakan’ Imerina manontolo. Nozonin’ Andriamasinavalona izy ka maty talohany ary nodimbiasan’ ny zanany Andriantrimobemihisatra. Andriamasinteny mpanjaka tompomenakely tao Imiakotso sy Manohilahy no ray niteraka an-dreniny. Ity mpanjaka ity dia isan' ireo nanapaka tamin’ ny ilany avaratra sy avaratra-andrefan' Imerina izay vakin’ ny renirano Sahasarotra mivarina any Betsiboka.
Fanaon’ Andriamasinavalona ny mitsidika sy mamangy ireo zanany sy zana-kavany notendreny hifehy ampahany avy amin' Imerina. Andriantomponimerina dia efa nampiseho ditra hatramin’ ny ela. Nampanaoviny sanga kely (na nitapa-bolo nihety ka misy sanga eo aloha) ny mponiny Marovatana ka izay tonga any ka tsy misanga na Merina na olon-kafa avy aty ivelany, dia nosamboriny amidy ho andevo. Tezitra ny vahoaka ka niteny tamin’ Andriamasinavalona. Dia nihomehy Andriamasinavalona nandre izany ka hoy izy: ”Aharoy volo i Merina, ry ley Andriantomponimerina !” Ary hoy ilay ity namaly boraingina:” Samy manana ny azy !”. Efa saika raikitra ny ady fa mody nanao maty izy. Nalahelo ny mpanjaka ka najanona indray ny fanafihana. Niainga ary Andriamasinavalona ho any Ambohidratrimo fa nataony ho maty tokoa ilay zanany. Nony tonga tao anaty Rova dia nohidin' Andriantomponimerina ny vavahady fito sosona, dia norobaina avy hatrany ny Merina tafiditra tao, ary Andriamasinavalona nobaboiny ka nahibony nandritry ny fotoana ela ka nahatezitra an’ Imerina izay saika hanafika an’ Ambohidratrimo nefa natahotra indray sao vonoiny ao ny andriamanjaka.
Tsy ela taty aoriana dia maty kendan’ ny taolana Andriantomponimerina, ary notsofin’ Andriamasinavalona handimby azy hanjaka tao Ambohidratrimo ilay zafikely ka nomena anarana hoe Andriantrimobemihisatra. Izany, hono, no niavian’ ny anarana hoe Ambohidratrimo fa ny tena anaran’ny taloha dia Imananety.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriantomponimerina&oldid=1009613"
Voaova farany tamin'ny 15 Martsa 2021 amin'ny 03:21 ity pejy ity.